Kunyanya-kudiridza chirimwa chepakati
Kupfuura-kuongorora kukura kwechirimwa
Kuwedzeredza-kushandisa pazvinhu zvinodiwa
Kupfuura-kutumira nezve mbanje mibvunzo
Vanotanga kukanganisa apo kurima mbanje
Kanganiso yakajairika inowanzoitwa nevarimi venguva yekutanga mbanje iri kudiridza zvakanyanya svikiro riri kukura iro rakabata mbesa nyowani. Mitemo yakajairwa ndeyekuti, paunotanga kuisira chirimwa chako chembanje, ipa fungidziro yako pamusoro pekuti inorema zvakadii kana yaoma. Nzira yakanakisa yekuita izvi ndeyekufefta. Wobva wanyorova chirimwa chako chembanje kusvika waona mvura ichibuda nemumakomba ekudonha. Kana mvura yangomira kupera, hefera chirimwa chako zvakare uone musiyano uripo pakati pezviviri. Ukangotamisa chirimwa zvakare uye chinonzwa senge paive pakaoma, iwe unoziva kuti inguva yekudiridza chirimwa chako zvakare.
Imwe mhosho yakajairika kuisa chikafu chakawanda pamuti wembanje. Kana iwe usina chokwadi chekuti yakawanda sei yekudyisa, saka ingo tevera nzira idzo bhodhoro rinoti; ipapo hauzove nechinhu chekufunganya nezvacho.
Imwe mhosho yakajairika iyo varimi vatsva vanowanzo ita iri pamusoro-kuongorora ese madiki misiyano mumuti wavo wembanje sezvainokura. Izvi zvinogona kuve zvese kubva pakufunga kuti chirimwa hachisi kufamba zvakanaka nekufunga kuti urikukanganisa mukukura. Chinhu chakanakisa kuita kutarisa kukura kuri kuita chirimwa uye uchiri kunzwisisa kuti shizha jena haringorevi kuti chirimwa chako chava kufa. Tarisa uone zvikwangwani zvakakura zvekuti pane chakaipa woedza woona zvaunogona kuita, asi usasvike pakusvitsa svikiro rechirimwa kunze kwekunge iwe uchiziva kuti ndiwo chete mushonga unogonesa wedambudziko. Iyo inowanzo nguva inokonzeresa matambudziko akawanda kupfuura painogadzirisa, kunyanya kana yaitwa kumuti uri kungoedza kugadzirisa.
Kuwedzeredza-kushandisa pazvinhu zvisina basa
Nzira yakanakisa yekudzivirira iyi mhosho ndeye kutora nguva yekuzvidzidzisa pachako pamusoro pekukura usati watanga kukura kwako kwekutanga. Izvi zvinobvumidza chero munhu ari kudzidza maitiro kuti atenge chete anodiwa michina uye zvekushandisa uye chengetedza iyo yekuwedzera investimenti kudzamara maitiro acho anzwisiswa uye nyore kudzokororwa.
Kana iwe ukatarisa-tarisa painternet, iwe ungangoona kuti iyo yese mibvunzo iyo iwe yaungazonyatsoda mhinduro kuti yatovepo uye yakapindurwa. Ingo ita chokwadi chekuti unongotaura chete nevanhu vanofanirwa kuziva nezve izvo zvauri kuita uye hapana mumwe munhu. Kunyanya vanhu vanoziva, zvakanyanya mukana wekukura kwako kuchauya kujekerwe.